टेलिकमले ल्यायो एफटीटीएच–जाडोमा न्यानो अफर | DNFMEDIA
टेलिकमले ल्यायो एफटीटीएच–जाडोमा न्यानो अफर
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले एफटीटीएच सेवाका ग्राहकका लागि एफटीटीएच–जाडोमा न्यानो अफर उपलब्ध गराएको छ ।
यस योजनामा २० एमबीपीएस वा सो भन्दा बढीको वार्षिक प्याकेज लिने एफटीटीएच सेवाका ग्राहकका मोबाइलमा दैनिक ३ सय एमबी डाटा एफटीटीएच–जाडोमा न्यानो अफर स्वरुप उपलब्ध गराइएको हो । यो अफर २०७७ पुस १ देखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
यसका लागि ग्राहकले एफटीटीएच आवेदन फारामको ग्राहक सम्पर्क नम्बरमा आफ्नो मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसअघि नै कायम रहेका ग्राहकले आफ्नो मोबाइल नम्बर नजिकको दूरसञ्चार कार्यालयमा उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ । एफटीटीएच जडान भएपश्चात् सो नम्बरमार्फत ८ज्ञद्धज्ञट३ डायल गरी प्राप्त निर्देशन बमोजिम प्रतिदिन ३०० एमबी निःशुल्क डाटा एक्टिभ गर्न सकिनेछ । यो डाटा टुजी,थ्रीजी,फोरजी सबै नेटवर्कमा, २४ सै घण्टा सबै किसिमका विषयका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ ।
एफटीटीएच–जाडोमा न्यानो अफर लिने ग्राहकले वार्षिक रुपमा १३ हजार रुपैयाँमा अत्यधिक सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन् । यस अफरमा दैनिक ३ सय एमबीपीएस डाटा ९प्रचलित मूल्य वार्षिक रुपमा रु. १० हजारभन्दा बढी०, निशुल्क पाइने सिपीई (प्रचलित मूल्य रु. २,८२५) र एकसय मिटर ड्रप फाइबर (प्रचलित मूल्य रु एक हजार) गरी कूल रु. १३ हजारभन्दा बढी रकम बराबरको सहुलियत प्राप्त हुनेछ ।
Previous: दोधारा चाँदनी नगरपालिका एक साताका लागि बन्द
Next: मेगा बैंकले ल्यायो ‘मेगा अभिभावक बचत खाता’